Igbo, John: Lesson 030 - Jizos duru ndi neso uzo ya ka ha hu owuwe ihe ubi (Jọn 4:27-38) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 030 (Jesus leads his disciples to see the ready harvest)
4. Jizọs nọ na Sameria (Jọn 4:1-42)
b) Jizos duru ndi neso uzo ya ka ha hu owuwe ihe ubi (Jọn 4:27-38)
27 Ya mere ndi nēso uzọ-Ya biara. O juru ha anya na ya na nwanyi nekwurita okwu; Ma ọ dighi onye ọ bula siri, Gini ka gi onwe-gi nāchọ? ma-ọbu, Gini mere gi na ya nēkwurita okwu? 28 Ya mere nwanyi ahu rapuru ite-miri-ya, we ba nime obodo, 29 si ndi ahu, hụ otu nwoke nke gwara m ihe niile m mere. Onye a puru ibu Kraist ahu? 30 Ha we si n'obodo ahu puta, nābiakute kwa Ya.
Ka nkwurịta okwu ahụ nọ na-aga n'ihu, ndị na-eso ụzọ si n'obodo nta ahụ lọta na nri ha zụtara. O juru ha anya ịhụ naanị Jizọs na nwanyị nke na-eme mmehie bụ onye na-agbagha onye Sameria. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha nwere ike ikwu okwu, ebe ọ bụ na ha chere na ọnụnọ nke Mmụọ. Ha huru ihe ebube Chineke nke Kraist mere, n'ihi na ihu nwanyi ah gbanwewo site n'ile anya na Kraist na ige nti okwu ya. Ọṅụ nke ịmara Onye nzọpụta ga-achị ya.
Nwaanyị ahụ wee hapụ ite ya. O nyeghị Jizọs iko mmiri nke ọ rịọrọ ka ọ bụrụ na ọ gbaghaara akpịrị ịkpọ nkụ ya. Ọ ghọrọ ọtụtụ mmiri nke mmiri dị ndụ nye ọtụtụ. Enye ama efehe aka obio oro kiet onyun etin ono mme owo onyun ada mmo ono kraist. Ọnụ ya na-ekwu okwu rụrụ arụ ugbu a bụ isi iyi nke àmà doro anya nye Kraịst. Ọ dọrọ ndị mmadụ gaa na Onye nzọpụta na-agba àmà otú o si kpuchie mmehie ya. Ndị obodo ahụ kwenyesiri ike na nkwupụta a bụ na ihe omume pụrụ iche mere: ọrụ nke Chineke n'ime nwanyị a. Ha chọsiri ike ịchọta ihe nzuzo ya wee gbaga n'olulu ahụ ebe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọ na-ezu ike.
Nke a bụ ihe atụ nke ihe mere mgbe Kraist na-arụ ọrụ n'ime ndị ga-eso ya. Anyị onwe anyị ga-agwa ndị enyi na ndị agbata obi na Kraist abịala ịzọpụta anyị. Mgbe ahu, ochicho maka mmiri di ndu ga-ebili nime ha site na Mo Nso. Ị ghọwo isi mmiri nke ọtụtụ ndị? Oburu na obugh, kwuputa nmehie gi nye Jisos, nye ya ndu gi, ka o we mee ka gi di ọcha ma do gi nsoputa, otua ka i gebu otutu ndi madu - dika ihe mere nwanyi mbu di na nwunye na ekwusa ozi ya
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ana m ekele gị maka ịchọ m ma mara m. Adịghị m mma karịa nwanyị a na-eme mmehie na Sameria. Gbaghara m mmehie m. Nye m onyinye Chineke nke na-eme ka akpịrị ịkpọ nkụ gụ m nkụ, mee ka ndụ m dị ọcha. Meghee anya m ịhụ Nna nke eluigwe. Mee ka obi m jupụta na Mmụọ Nsọ, ka m wee ghọọ onye bara uru, ndụ m pụkwara ịghọ ngosipụta nke ofufe iji meghachi omume n'amara gị. Zọpụta ọtụtụ, ma dọta ha onwe gị. Ị gaghị ajụ ndị na-abịakwute gị.
Olee otú anyị nwere ike isi ṅụọ mmiri site na mmiri dị ndụ?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:53 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)